Tunisia: Vashanyi vanosvika kusvika gumi neshanu muzana, mari dzekushanya dzinosvika madhora mazana matatu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Tunisia: Vashanyi vanosvika kusvika gumi neshanu muzana, mari dzekushanya dzinosvika madhora mazana matatu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Tunisia Kupwanya Nhau
Tunisia yakaratidza kuwedzera kwe18 muzana muvashanyi vanosvika mukati memwedzi mina yekutanga yegore rino, zvichienzaniswa nenguva imwecheteyo gore rapfuura. Sekureva kweBazi rezveKushanya neImhizha, huwandu hwevashanyi vekunze kubva munaNdira hwaipfuura mamirioni maviri, nemari inowanikwa kusvika pamamirioni mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuAmerica.
Bazi rezveKushanya neImhizha rinovavarira kukwezva vashanyi vanosvika mapfumbamwe mwaka uno. Vaongorori vanoti zviratidzo zvekufambira mberi zvakanyorwa pamwedzi wega wega zvinotangira pamakumi maviri neshanu kusvika makumi matatu muzana kumisika yese, kunyanya kumisika yeRussia neChina.
Nezve mafambiro kuenda kuEl Ghriba, Djerba, zviremera zvakasimbisa kuti gadziriro dzese dziri kuenderera yechiitiko icho chichaitika musi waMay 22-23.
Munyori-mukuru weWorld Tourism Organisation UNWTO akataura rutsigiro ruzere kuzviremera zveTunisia mukuzadzisa chinangwa chavo chekuwedzera huwandu hwevashanyi mu2019.
Misika yeMaghreb, inomiririra 44 muzana yevashanyi vanosvika kusvika nhasi, vaona kuwedzera kuri kuwedzera. Pakati pechikamu chekutanga che2019, Tunisia yakagamuchira vangangoita 496,000 maAlgeria vashanyi uye 473,000 maRibya.
Nyika zhinji dzakasimudza zvirambidzo zvekufamba kuTunisia nematunhu ayo. Yekupedzisira yaive Spain, svondo rino neJapan munaKurume 2019. Zviremera munyika idzi zvakarambidza nzendo dzekuTunisia zvichitevera kurwiswa kwekutyisa paBardo National Museum uye nzvimbo yekumahombekombe yegungwa muguta reSousse.
African Tourism Board vakuru vakakorokotedza Tunisia kuve muenzaniso wakanaka wekusimba mukushanya.